इस्टर्न रिजन कपः १८ खेलाडीको नाम सार्वजनिक, को–कोले पाए प्रारम्भिक टोलीमा मौका? - Everest Dainik - News from Nepal
इस्टर्न रिजन कपः १८ खेलाडीको नाम सार्वजनिक, को–कोले पाए प्रारम्भिक टोलीमा मौका?
काठमाडौंः थाइल्याण्डमा हुने एसीसी इस्टर्न रिजन मेन्स टी–२० कप क्रिकेटका लागि नेपाल क्रिकेट संघले १८ खेलाडीको नामावली सार्वजनिक गरेको छ । त्रिकोणात्मक सिरीजका लागि छनोट भएका १८ खेलाडीको सूचीमा रहेका सुवास खकुरेल अटाएका छैनन् । यही सूचीबाट क्यानले १४ खेलाडी छनोट गर्नेछ । सोमपाल कामी सो बेलासम्म पनि ठिक नहुने भएकाले टिममा राखिएको छैन । उनी भिटामिन डी को कमिका कारण हाल पूर्ण रूपमा फिट छैनन् ।
याे पनि पढ्नुस स्वदेश फर्कियो नेपाली क्रिकेट टिम
थाइल्याण्डमा फेब्रुअरी २९ देखि मार्च ६ तारिखसम्म हुने प्रतियोगितामा नेपाल समूह ए मा रहेको छ । जसमा नेपाल रहेको समूहमा थाइल्याण्ड, मलेसिया र म्यानमार रहेका छन् । समूह बी मा हङकङ, सिंगापुर, भुटान र चीन रहेका छन ।
नेपालले प्रतियोगिताको पहिलो खेल चीनसँग खेल्नेछ । दोस्रो खेलमा नेपालको प्रतिद्धन्द्धी थाइल्याण्ड रहेको छ भने तेस्रो खेल मलेसियासँग खेल्नेछ । दुई समुहको शिर्ष दुई टिम सेमिफाइनलमा पुग्नेछन । प्रतियोगिताको विजेताले पाकिस्तानमा हुने एसीसी एसिया कपमा स्थान बनाउने छ ।
याे पनि पढ्नुस इस्टर्न रिजन कपः पहिलो खेलमै नेपाललाई झड्का, मलेसियासँग पराजित!
क्यानले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक नेपाली टोलीः ज्ञानेन्द्र मल्ल (कप्तान), पारस खड्का, दिपेन्द्रसिंह ऐरी, आरिफ शेख, विनोद भण्डारी, सन्दीप लामिछाने, करण केसी, अभिनाश बोहरा, पवन सराफ, कुशल मल्ल, सन्दीप जोरा, भुवन कार्की, सुशन भारी, किशोर महतो, लोकश बम, शेर मल्ल, कमलसिंह ऐरी र रोहित पौडेल ।
याे पनि पढ्नुस इस्टर्न रिजन कपः मलेसियाविरुद्ध सन्दीपले लिए लगातार २ विकेट
ट्याग्स: इस्टर्न रिजन कप, नेपाली क्रिकेट टिम